Sebenzisa ikhadi lesipho le-Airbnb | Airbnb®
Sebenzisa ikhadi lakho lesipho
Uma usebenzisa ikhadi lakho lesipho le-Airbnb, ikhredithi yesipho izotholakalela ukufakwa ekubhukheni kwakho okulandelayo.
Inombolo yekhadi lesipho
Sebenzisa ikhadi lesipho
Okwamanje ingasetshenziswa kuphela abantu base-US ngendlela yokukhokha yase-US.
Kuzodingeka ube nendlela yokukhokha ekhishwe e-US ku-akhawunti yakho ngaphambi kokusebenzisa ikhadi lesipho. Uma ingqikithi yakho ihlukile kukhredithi yakho yesipho, izosetshenziselwa ukukhokha okusele.
Uma sesisetshenzisiwe, isikweletu sesipho siyatholakala ukuze ufake izicelo zokubhukha manje noma kamuva. Ngezindlu ezivuliwe ezingu-5.6 million namashumi ezinkulungwane okokuzithokozisa okutholakala ku-Airbnb, kunezindlela eziningi kakhulu zokwazi izindawo.
Amakhredithi esipho awakwazi ukusetshenziselwa ukukhokhela ushintsho ekubhukheni okukhona, kanye nokukhokha okuhleliwe noma okuzayo kokuhlala isikhathi eside noma izinhlelo zokukhokha.
Ngaphansi kwesigaba sezindlela Zokukhokha kwakho se-Akhawunti uzothola ikhredithi yesipho se-Airbnb nebhalansi yakho yamanje. Chofoza okuthi Bonisa imininingwane ukuze uhlole uhlu lwamakhadi ezipho asetshenziswe ku-akhawunti yakho.
Siyakwamukela emphakathini wokuvakasha we-Airbnb. Nomaphi lapho uya khona, sinendawo yakho. Funda kabanzi
Phuma uyovula umqondo wakho
Hlela uhlobo olwehlukile lweholide ukuze uthole amagugu afihliwe eduze nawe.
Ukuzijabulisa okuyingqayizivele okungenziwa usekhaya, okuhlanganisa okokuzithokozisa neqembu labalingisi be-Broadway kanye nezisebenzi.
Izindawo ezinethezekile zokuba wedwa, ezinekamelo labangane noma lomndeni lapho ungaphumula khona uhlale isikhashana.
Ngingawathenga kanjani amakhadi ezipho?
Ukuze uthenge amakhadi ezipho e-Airbnb ayidijithali angathunyelwa nge-imeyili noma ngomyalezo, sicela uvakashele ikhasi lohlelo lwethu lwamakhadi ezipho akwa-Airbnb. Amakhadi ezipho akwa-Airbnb angathengwa nakubadayisi abahlukahlukene ezitolo kulo lonke elase-United States. Njengamanje, amakhadi ezipho angathengwa kuphela futhi asetshenziswe abantu base-United States ngendlela yokukhokha ekhishwe e-United States. Ukuze u-ode amakhadi ezipho ngobuningi, vakashela isayithi yokuthenga yethu yezinkampani. Uku-oda ngobuningi kudinga okungenani ukuthenga kusuka ku-$1,000 USD.
Ingabe amakhadi ezipho atholakala e-US kuphela?
Njengamanje, amakhadi ezipho angathengwa futhi asetshenziswe kuphela ngabantu base-United States ngendlela yokukhokha ekhishwe e-United States. Bona imigomo yekhadi lesipho
Kungani kudingeka ngifake enye indlela yokukhokha?
Kuzodingeka ube nendlela yokukhokha ekhishwe e-United States ngaphambi kokuba usebenzise ikhadi lesipho. Uma ingqikithi yakho ihlukile kubhalansi yakho yekhredithi yezipho, izosetshenziselwa ukukhokha okusele.
Kuthiwani uma ngilahlekelwa yikhadi lami lesipho?
Kufanele uphathe Amakhadi Esipho njengokheshi. Uma sithumela Ikhadi Lesipho eliyidijithali kumthengi noma kulowo ongumnikazi, noma siletha Ikhadi Lesipho ngokwalo kumnikazi, kunoma yikuphi okwenziwayo, ubungozi bokulahleka Kwamakhadi Esipho engakafiki kubanikazi idlulela kulowo othengile. Asinacala uma kukhona Ikhadi Lesipho elilahlekile, elebiwe, elonakalisiwe noma elisetshenziswe ngaphandle kwemvume yakho.
Uneminye imibuzo? Iya ku-help center yethu